Kwụsị: mba 80 gụnyere UK, UAE, France, Israel, Thailand, Aruba na ndepụta njem ọ bụla!
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Kwụsị: mba 80 gụnyere UK, UAE, France, Israel, Thailand, Aruba na ndepụta njem ọ bụla!
Akụkọ Aruba Na -agbasa • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Eswatini Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akwụkwọ akụkọ French Polynesia • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Iceland • Israel Na -agbasa Akụkọ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Agala njem na Aruba, Eswatini, France, Iceland, Israel na Thailand
Dabere na CDC, mba ndị akpọrọ dị ka “COVID-19 dị oke egwu” enweela ikpe 500 n'ime ndị bi na 100,000 n'ime ụbọchị 28 gara aga. Ụmụ amaala US ekwesịghị ịga mba ndị a, belụsọ na agbachara ha ọgwụ mgbochi. Taa agbakwunyere mba 7 ọzọ na ndepụta a.
Ndepụta mba iri asatọ kacha dị ize ndụ ị ga njem n'oge a dịka CDC siri kwuo
A dọrọ ndị America aka na ntị banyere nnukwu ihe egwu njem mgbe ha na -eleta France, Israel, Thailand, Aruba, Iceland na Eswatini.
CDC na-emelite ndepụta nke ebe ndị nwere nnukwu ihe egwu, na-agbakwunye njem 7 na-ewu ewu na njem nlegharị anya na ndepụta nke "zere njem" (ihe iyi egwu kachasị).
Gọọmentị US na-atụ aro na ọ bụ naanị ndị America gbara ọgwụ mgbochi zuru oke kwesịrị ịga France, Israel, Thailand, Aruba, Iceland na Eswatini.
The Ụlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa US (CDC) taa kwupụtara mgbakwunye mba asaa ọzọ na ndepụta 'Ọkwa 4' nke steeti na -enye ndị ọbịa ihe iyi egwu coronavirus kachasị.
N'ime ntuziaka ya, CDC na-atụ aro izere njem kpamkpam na ebe akpọrọ dị ka, "Ọkwa 4: COVID-19 dị oke elu," ọbụlagodi ndị njem nwere ọgwụ mgbochi.
Dabere na CDC, mba ndị akpọrọ dị ka “COVID-19 dị oke egwu” enweela ikpe 500 n'ime ndị bi na 100,000 n'ime ụbọchị 28 gara aga.
Mba 7 agbakwunyere ọhụrụ na CDC Ndepụta "Ọkwa 4: COVID-19 dị oke elu" dị ka Ọgọst 9, 2021, bụ:
Onye nchịkwa US kwukwara na onye America ọ bụla ga -aga ebe ndị a kwesịrị ịgba ọgwụ mgbochi ọ bụla.
“Ndị njem nwere ọgwụ mgbochi ọrịa adịchaghị enweta ma gbasaa COVID-19. Agbanyeghị, njem mba ofesi na-ebute ihe egwu ndị ọzọ, ọbụlagodi ndị njem nwere ọgwụ mgbochi nwere ike nọrọ n'ihe egwu dị ukwuu maka ịnweta na ikekwe gbasaa ụfọdụ ụdị COVID-19, " CDC na nduzi ya.
Izu gara aga CDC agbakwunyere mba iri na isii na ụdị ihe egwu "dị oke elu". Nzukọ a na -emelite ndepụta ọkwa oge niile site na ọkwa 16 (“dị ala”) ruo ọkwa 1 (“dị oke elu”).
Ugbu a, CDC dọrọ ụmụ amaala America aka na ntị ka ha gaa mba na mpaghara ndị a. N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ gụnyere US Virgin Islands, nke bụ akụkụ nke United States.
Zere ime njem ebe ndị a. Ọ bụrụ na ị ga -agarịrị ebe ndị a, gbaa mbọ hụ na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa nke ọma tupu ime njem.
Nke a bụ ndepụta mba anọ dị ka Ụlọ Ọrụ Nchịkwa Ọrịa na United States si kwuo.
Agala mba 80 edepụtara:
Morten Litthau Jensen ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 11, 2021 na 21:02
Ụfọdụ obodo ị nweghị ike ịga
Ọ gwụla ma ịgba ọgwụ mgbochi ọ bụla bụ ụfọdụ n'ime obodo ndị kacha agba ọgwụ mgbochi n'ụwa.
Dr Basava ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 10, 2021 na 20:32
Kedu maka Russia na Ukraine?
Ọ dị mma na ịgba ọgwụ mgbochi nke ọma?